Big City Small World (Series2Episode 12 – Something in Common) - Myanmar Network
Big City Small World (Series2Episode 12 – Something in Common)
Posted by Forum Moderator2on January 25, 2013 at 16:28 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode 12 – Something in Common (အတွဲ ၂၊ အခန်း ၁၂) (အကြိုက်ချင်းတူတဲ့အရာတစ်ခု)
Series2Episode 12 - Something in Common ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Carlos and Sarah's second date doesn't turn out great either. Will their relationship work out?
(ကာလို့(ခ)နဲ့ ဆာရာတို့ရဲ့ ဒုတိယဒိတ်ကလည်း သိပ်အဆင်မပြေလှဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အဆင်ပြေပါ့မလား?)
Olivia: Hi Sarah!
Magda: How are you?
Sarah: Oh, not bad, I suppose…
အာ် သိပ်မဆိုးဘူးလို့ ထင်တာပဲ
Bindyu: What’s up?
Sarah: Nothing really ...just that... well, I hope Carlos isn’t coming in today...
ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ တကယ်ပါ…..တစ်ခုပဲ ဒီနေ့ ကားလို့(ခ) မလာပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေတာ
Sarah: Well, he took me out onadate last night.
အင်း ညက သူနဲ့ကျွန်မ ဒိတ်လုပ်ပြီး အပြင်သွားကြတယ်လေ။
Bindyu: That’s the second time you’ve been out together, isn’t it?
ဒါနဲ့ပါဆို ရှင်တို့အတူတူအပြင်သွားကြာတာ နှစ်ကြိမ်ရှိပြီ မဟုတ်လား?
Sarah: Yes – and it’ll be the last!
ဟုတ်တယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒါ နောက်ဆုံးပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်
Olivia: Oh no! What happened?
အို မဟုတ်တာ၊ ဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲ?
Sarah: Well, he asked me to go out with him, but didn’t tell me where we were going...
အေး သူကကျွန်မကို အပြင်သွားဖို့ခေါ်ပေမဲ့ ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ မပြောခဲ့ဘူး။
Magda: Ooh...asurprise – how great!
အိုး အံ့သြသွားရအောင်ပေါ့။ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ
Sarah: No – it wasn’t great!
Olivia: Where did he take you?
မင်းကို သူ ဘယ်ခေါ်သွားခဲ့လဲ
Sarah: Toafootball match!!!
Magda: Oh. I didn’t know you liked football...
အို ရှင်ဘောလုံးကြိုက်မှန်း ကျွန်မ မသိရပါလား
Sarah: I don’t! I hate it!
Olivia: Who was playing?
Sarah: I don’t know... one team in red, the other team in blue... It was so boring!
ကျွန်မ မသိပါဘူး၊ တစ်သင်းက အနီရောင်၊ တခြားအသင်းက အပြာရောင် အရမ်းကို ပျင်းဖို့ကောင်းတာပဲ
Olivia: Why did he take you there?
သူက ရှင့်ကို ဘာကြောင့် အဲဒီကို ခေါ်သွားရတာလဲ
Sarah: I don’t know – the stupid thing is, he doesn’t like football either!
ကျွန်မလည်း မသိဘူး၊ ပိုစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတာက သူလည်း ဘောလုံး ပွဲမကြိုက်ဘူး။
Olivia: I think I know why he took you... Hello Fadi! Hello Johnny!
ရှင့်ကို သူဘာ့ကြောင့် ခေါ်သွားလဲဆိုတာ ကျွန်မ သိပြီလို့ထင်တယ်၊ ဟယ်လိုဖာဒီ ဟယ်လိုဂျွန်နီ
Fadi/Johnny: Hi all!
Olivia: Can I ask you twoaquestion?
ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကို တစ်ခုလောက် မေးလိုရမလား?
Olivia: Was it your idea for Carlos to take Sarah toafootball match?
ကာလို့(စ)က ဆာရာကို ဘောလုံးပွဲခေါ်သွားဖို့ အကြံက ရှင့်အကြံလား
Fadi: Erm, er...
Johnny: It was Fadi’s idea.
Fadi: No it wasn’t! It was your idea!
မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒါ မင်းရဲ့အကြံပါ
Olivia: OK, OK, enough.
ကောင်းပြီ၊ ကောင်းပြီ တော်လောက်ပါပြီ
Fadi: So, Sarah – did you haveagood time?
ကဲ ဒါဖြင့် ဆာရာရေ ပျော်ခဲ့ရဲ့လား
Johnny: I think that means no.
အဲဒါ မပျော်ဘူးလို့ ပြောတာထင်တယ်။
Sarah: It was awful.
Fadi: Poor Carlos.
Johnny: Yeah – he’s crazy about you!
ဟုတ်ပါ့ သူက မင်းကို အရူးအမူးပဲ
Magda: I think he’s so sweet.
ကျွန်မကတော့ သူ့ကို ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်
Bindyu: Yeah, he is. You should try going out with him again.
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရှင်သူနဲ့ထပ်ချိန်းပြီး အပြင်သွားဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်။
Magda: Go on! Give him another chance!
Sarah: I don’t know... I’m not sure...
Bindyu: Oh... Here he is now!
ဟာ အခုတောင် သူ လာနေပြီ
ဟိုင်း - ကာလို့(စ)
Carlos: How are you all today?
မင်းတို့ အားလုံး ဒီနေ့ အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုရှိကြလဲ
All: Great! Fine! Not bad...
အလွန်ကောင်၊ ကောင်းပါ၊့ မဆိုးပါဘူး
Olivia: So – I hear you and Sarah went out again last night?
ဒါနဲ့ ရှင်နဲ့ဆာရာ ညကချိန်းပြီအတူ အပြင်ထပ်ထွက်ကြပြန်တယ်ဆို
Carlos: Oh, erm, yeah...I don’t want to talk about it...
အာ် အင်း …ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီအကြောင်း ငါ မပြောချင်ဘူး
Johnny: Sorry – perhaps our great idea wasn’t so great after all.
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါတို့ရဲ့ မဟာအကြံကြီးက သိပ်မကောင်းလှဘူးထင်တယ်။
Carlos: No. It wasn’t.
Olivia: Never mind – ask her out again.
ကိစ္စမရှိဘူး၊ သူ့ကို ထပ်ပြီးချိန်းလိုက်ဦးပေါ့
Olivia: OK. I’ll do it for you then!
ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုရင် ရှင့်အစား ကျွန်မ လုပ်ပေးမယ်။
Carlos: Oh no...
Olivia: Hey, Sarah – I’ve just seen there’sagreat new film coming out this weekend.
ဟ့ ဆာရာရေ ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ ရုပ်ရှင်ကားသစ်ပြမယ်တဲ့။
Sarah: Oh yeah? Sounds good – I love cinema. Why don’t we go together?
အိုဟုတ်လား? ကောင်းလိုက်တာ၊ ကျွန်မက ရုပ်ရှင်ကြိုက်တယ်လေ
Olivia: OK...oh! No.I’ve just realised – I can’t go to the cinema this weekend. I have to look after Joe.
ကောင်းပြီ၊ ဟာ မဖြစ်သေးပါဘူး၊ အခုမှ သတိရတယ်၊ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့မရဘူး၊ ဂျိုးကို ထိန်းရဦးမှာ
Bindyu: I’d love to come, but I’m helping Olivia with Joe...
ကျွန်မလည်း လိုက်ပေးချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အော်လီမီယာနဲ့ ဂျိုးကို ကူထိန်းရမယ်
Johnny: I’m working all weekend...as usual!
ငါကတော့ ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်လုံး အလုပ်လုပ်ရမယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲလေ။
Fadi: Yeah – I’d go, but I’m playing football with Harry.
အးဟယ် နို့မဟုတ်ရင် ငါလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါက ဟယ်ရီနဲ့ ဘောလုံးကန်မလို့။
Carlos: I’m not doing anything. I love cinema.
ငါကတော့ ဘာမျှ မလုပ်ဘူး။ ငါလည်း ရုပ်ရှင်ကြိုက်တယ်။
Sarah: I didn’t know you liked cinema! You never told me...
ရှင်ရုပ်ရှင်ကြိုက်မှန်း ကျွန်မ မသိခဲ့ရပါလား၊ ရှင်ကျွန်မကို တစ်ခါမှ မပြောဘူးပါဘူး။
Olivia: Excellent! Carlos can go with you! You have something in common.
သိပ်ကောင်းတာပေါ့၊ ရှင်နဲ့ကားလို့(ခ) သွားလို့ရတယ်။ ရှင်တို့နှစ်ယောက်မှာ အကြိုက်ချင်းတူတာ တစ်ခုတော့ရှိသားပဲ
Sarah: Oh well... erm... OK then...
အာ်…အင်း ဒါဖြင့်လည်း ကောင်းပြီလေ
Carlos: Great – I’m looking forward to it!
Olivia: Fadi – are you really playing football with Harry this weekend?
ဖာဒီ ရှင်ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ တကယ်ပဲ ဟယ်ရီနဲ့ ဘောလုံးကန်မလို့လား
Fadi: Yeah. Only on Saturday afternoon, though.
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ စနေနေ့ နေ့လည်ပါပဲ။
Olivia: So you’re free on Saturday night?
ဒါဖြင့် ရင် စနေနေ့ညမှာ အားတယ်ပေါ့
Fadi: Erm, yeah.
Olivia: You’re not going out with one of your girlfriends?
ရှင့်ရဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ချိန်းပြီး အပြင်သွားဖို့မရှိပါဘူးနော်။
Fadi: Erm, no...
Olivia: Well, Bindyu will look after Joe on Saturday night.
အဲဒါဆိုရင် စနေနေ့ညကျရင် ဘင်ဒျူက ဂျိုးကို ထိန်းပေးမှာ
Olivia: So I’m not doing anything on Saturday night.
အဲဒီတော့ စနေနေ့ညမှာ ကျွန်မ အားနေတယ်
Olivia: Look – I mean – why don’t we go out together?
ဒီမှာ ကျွန်မပြောချင်တာက တို့နှစ်ယောက်ချိန်းပြီး အပြင်သွားကြရအောင်လား။
Fadi: Us? Me and you?
ငါတို့၊ နင်နဲ့ ငါ
Fadi: Erm... er... OK... yeah! Great! Let’s go out for something to eat!!!
အာ…အဲ…အေး….ကောင်းသားပဲ။ အပြင်ထွက်ပြီး တစ်ခုခု စားကြရအောင်
Olivia: Finally! I thought you’d never ask!!!
အခုမှပဲ! ဘယ်တော့မှ မမေးတော့ဘူးလို့ ထင်နေတာ။
Permalink Reply by thant zin tun on January 26, 2013 at 18:13
Permalink Reply by jelnay83@gmail.com on February 3, 2017 at 11:22
I can't copy this time , what's wrong